Imfashini yezimfashini zezicathulo zamadoda ihlale ikhonjiswe ngokunye ukuvimbela kanye ne-laconicism, ngakho-ke isici esiyinhloko samathenda sifihliwe ngokuningiliziwe. Yimaphi abadwebi bokuqala abalungiselelwe amadoda ngesikhathi sonyaka kahlobo-ehlobo 2016? Ukufingqa iseluleko kanye nokuqoqwa kwama brand best emhlabeni, ungakwazi ukugqamisa amamodeli ezifanele kakhulu.
Abaqambi abaguquli abaholi
Ukushintshwa kwekhadi ngokushintshwa kokuqala kwenkathi entsha akudingekile - kulesi simo ukuhlala kubaholi bezokuthengisa nokukhombisa ngonyaka odlule. Okubalulekile emfanekisweni wesilisa oyimfashini kuyoba:
Izicathulo zesikhumba ezenziwe ngamapulangwe;
Kulabo abathanda isitayela esizimele, abadwebi bePaolo Conte banikeze ububanzi bezimodeli ezihlanganisa ifomu oyithandayo kanye nezindlela zokusika.
Umbala omusha emoyeni
Yini ngempela ezokwenza amanothi okuqala emthonjeni wezitshalo ezisekhwalithi-zasehlobo ziyizingcaphuno kanye nezesekeli. Kulo nyaka ekugcineni kwezinqumo ezithandwayo ezithandwayo futhi inhlanganisela engavamile engqondweni ye-pop art. Izicathulo ezinjalo, ngisho nangomfanekiso oqaphele, zingangeza amanothi amasha. I-spectrum yombala yenkathi efudumele ayikhawulelwanga kwendabuko yamaqoqo wesilisa wembala emnyama. Ngo-2016, amadoda angakwazi ukukhombisa umqondo oyingqayizivele wesitayela ekukhethweni kwezicathulo ezivamile, amamodeli womsebenzi nokuzilibazisa. UPaolo Conte uboniswe ezinhlobonhlobo zasentwasahlobo izitayela eziphambili kakhulu zonyaka.
Abaduni behlathi elisezindaweni zasemadolobheni
Kule nkathi, ukuzikhawulela kuma-invoyisi wezicathulo ezifunwayo akuvunyelwe. Ungakhetha ngokuphephile ukuphela okungavamile nokuthungwa kwempahla:
Ngesikhathi esifanayo, amamodeli anenhlanganisela yezinhlobonhlobo zombala nokuthungwa kuyoba efanele kakhulu.
Amamodeli ngesitayela samaklasi amasha
Kungakhathaliseki ukuthi imifashini yefashini, akukho iqoqo le-self-respecting brand ayikwazi ukuyenza ngaphandle kwama-classic. Khona-ke ukuphatha abaqambi beza - bakwazi ukuhlanganisa ngokuvumelana nezigaba zakudala ezingakapheli nemikhuba yakamuva. Iphalethi yezicathulo zomuntu zakudala zimeleleke kakhulu ekuqoqweni kwe-Spring-Summer 2016 evela kuPaolo Conte. Lapha ungathola:
ukungabikho okungenangqondo kwesitayela se-rocker noma se-punk;
izakhi ze-stylistics yezemidlalo.
Ukuhlanganiswa okumangalisayo kwezikhombisi-ndlela ezihlukile ngokuyisisekelo namuhla kumkhuba kunanini ngaphambili. Ngomuntu ohlala edolobheni, lapho isigqi singekho khona, futhi akusikho isikhathi sezintambo, izicathulo ezivela ezilasini ezintsha zikaPaolo Conte ziyoba insindiso yangempela. Zifanele ngokufanayo ehhovisi, club, restaurant kanye nokuhamba, futhi umnikazi wabo unesikhathi sezinto ezifanele ngempela.
Ukuqaphela ikakhulukazi kubhalwa imibala nokuthungwa kochungechunge. Abakhiqizi banikeza i-palette eyandisiwe, ukusebenza okuhambisana ne-textural game. Iqoqo elisha lihambisana ngokufanayo nangesikhumba, ne-suede, ne-varnish, kanye nezindwangu. Inhlanganisela enemibala emibalabala, kodwa, ehambisana nokuvumelanisa kakhulu, iqedela ukukhetha okuhle kakhulu kweklasiki. Ukunakwa okuhlukile kufanelwe abalahlekile, abangayeki izikhundla zezinkathi eziningana. Amadoda asuke anqobile lokho okusebenzayo kuleli fomu, elihlanganiswe kahle ngokulingana kwe-trouser eqondile futhi ifika ku-jeans ekhululekile. Umzila wesimodeli ukhulula izandla ekukhethweni - nge-palette encane ye-classic yezingoma ezikhanyayo nezomnyama, umdlalo wokubhala umbhalo uzwakala kahle. Ukuxhasana nokududuza kwalowo mdwebo wezithombe kuncibilikiswa ukuthi i-fashionista yesimanje ngaphandle kwama-loffers ayikwazi ukwenza ngaphandle.
Imidlalo - yebo!
Kulo nyaka ukuthambekela kokuhlanganiswa okufanele kwesitayela sebhizinisi lezinhlayiyana ngezicathulo zezemidlalo kuqhubeka, ngakho-ke akukho ndawo yokuziphika kalula. Ama-sneakers kanye nama-moccasin amelwa kabanzi yiqoqo elisha lasehlobo lase-Paolo Conte ngokuhambisana nazo zonke izidingo zokuthambekela. Ama-moccasins ohlelweni lombala wesitayela, okubandakanya ukuthatha imigwaqo yedolobha lapho kuqala ukushisa, okuhambisana nempahla ehlukile, izesekeli kanye namagundane. Ngezinsuku ezishisayo, onobuhle obuhlelwe ngezindlela ezihlukahlukene zokuhamba nge-perforation yokunyuka okugqoke ukugqoka. Ngokuqondene nalabo abaphezulu kanye nama-sneakers, amamodeli we-palette yokuthambekela ahlotshiswe ngomhlobiso ngemibala ehlukene, ngakho-ke ngeke ahlale engabonakali emfanekisweni wesilisa onyakazayo wehlobo lohlobo lwehlobo lehlobo lehlobo lehlobo lehlobo lehlobo le-spring 2016. Ngokwesiko, lo mkhiqizo awuzange usuke ekudingeni ukwanda kwezimfanelo nezemidlalo. Naphezu kokuthi amamodeli amaningi aklanyelwe ezemidlalo, kodwa ekuhambeni nasekusetshenzisweni kwansuku zonke, yonke iqoqo lezimfuneko zokuphepha ezinzulu.
Akunakwenzeka ukuthi noma ngubani oyomangala ukuthi ehlobo izibonelo ezifanele kakhulu ziyoba izicathulo nezinhlobo ezahlukene ze-perforation. Ikhono lonyawo lokuphefumula ngalolo lwazi yisiqinisekiso samandla nokukhuthazela komnikazi wayo. Yingakho ukuhlelwa kwehlobo kwePaolo Conte kuhlanganisa izidingo ezimbili ezibaluleke kakhulu:
izinto zemvelo (isikhumba, i-suede, izembatho);
ukuvuleka okukhulu kwezicathulo.
Enye indlela, ukukhula ngokushesha, ukulahlwa kwezimbali ezivamile. Ama-shades omdabu omnyama nabomnyama ahlala, kodwa i-palette yasehlobo izofaka izintandokazi eziyinhloko zabaqambi - umbala wogagasi olwandle, i-burgundy, umbala wamaqabunga ashisayo.
Izimpawu zezicathulo ezifashini
Ukuze ukhethe izicathulo zangempela, ama-loffers noma ama-moccasins, akudingekile ukuba ulandele imodeli ethize ekhanyise umbukiso wefashini noma ukudubula kwesithombe ngenkanyezi. Uma wazi izitayela eziyinhloko, imodeli efanelekayo itholakala kokubala okubili:
khetha amabhulodi anezimpawu zokubamba;
ngokufakazela ngesibindi ukunyatheliswa kohlanga;
Ungayibheki inhlanganisela yezinto ezihlukene ekuthungeni;
khetha amamodeli ngokufaka umbala.
Spring-ehlobo ka-2016 yisikhathi sokwenza izinqumo ezinesibindi. Ngomunye umuntu, lokhu kuzoba umbala ogcwele we-pair entsha, abanye bayothanda amancane, kodwa izakhi zangempela noma ukuphrinta okumangalisayo. Kunoma yikuphi, lesi sizini yisikhathi sokuzithola wena nokuzama!
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo weBenitoit
Indlela yokukhulisa izinwele ezinempilo nezindebe
Potato isobho puree
Ikhodi yokugqoka yebhizinisi
I-Pineapple Pie engaphenduliwe
Yini ongayidla ngokuqunjelwa okungapheli?
Ilayisi nezinhlanzi zasolwandle ngesiJapane
Indlela yokudla, ukugeza, ukubeka amawele noma amawele ukulala
Iseluleko kubesifazane ukukhulisa ukuzethemba
I-Pop njenge-nut: funda ukuthi ungadonsa kanjani imbongolo ekhaya
Indlela yokubuyisela izinwele ezomile